Kuburitsa kunoenderera: iyo A10 yeiyo iPhone 7 inowanikwa mumufananidzo | IPhone nhau
Wedzera uye enda mberi. Kubuda pane iyo iPhone 7 kana zvimwe zvezvinhu zvacho hakumire. Chinhu chekupedzisira chakaonekwa mumufananidzo chave chiri icho A10 processor, iyo ichafambisa iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Semazuva ese, mufananidzo wakaonekwa nezuro paSina Weibo, inozivikanwa seChinese Twitter, uye yaive rakabudiswa gare gare naTechtastic.nl, chinhambwe cheDutch icho chakatoburitsa zvinhu zvakawanda zveiyo iPhone nekubudirira.
Kunyangwe hazvo chiri chokwadi kuti isu tinofanirwa kuramba takakahadzika pamusoro pekudonha kupi, ichokwadi zvakare kuti tangori nemwedzi mumwe chete kubva pakuratidzwa iPhone 7, saka zviri nyore kune zvese zviri kubuda muApple cheni yekutengesa. Kunyangwe ini ndichida kurangarira maonero angu maererano nekudonha uye nditi ndinofunga havazi vakadaro, asi kuti iApple pachayo inoronga zvese.
Iyo A10 ichagadzirwa neTSMC
Mufananidzo wekutanga unouya kwatiri kubva Geekbar, kambani yakatsaurirwa kugadzirisa zvigadzirwa zvemagetsi, kunyanya izvo zveApple. Akatoburitsa zvinhu zvinoverengeka uye achifunga kuti vanofanirwa kudzidza pamberi peumwe munhu nezve izvo zvavanofanira kugadzirisa, zvingangoita kuti ndezvechokwadi.
TSMC inotarisirwa kunge iri yega kambani inogadzira iyo A10 uye A10X processor ye iPhone ne iPad. Maererano nerunyerekupe, iyo A10 ichaperekedzwa ne2GB ye RAM mune 4.7-inch modhi uye 3GB ye RAM mune Plus modhiIyo yepamusoro kamera sisitimu ndiyo yekupembedza yekuwedzera RAM ndangariro mune hombe iPhone. Izvo zvinogona zvakare kukurudzirwa nekuve yakakwira skrini resolution, nekuti runyerekupe runoti inogona kunge iri 4K pane iyo iPhone 7 Plus.
Runyerekupe rwazvino runoti iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ndizvo ichauya munaGunyana 7, saka isu tatova nemavhiki asingasviki mana ekumirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Kuburitsa kunoenderera: iyo A10 yeiyo iPhone 7 inowanikwa mumufananidzo